30 Archives - Tameelay
July 30, 2020 by daddy
ယခုအကွောငျးအရာသညျ ရှပွေညျသာအရနျမီးသတျတပျဖှဲ့ တငျထားသော Post အား ပွနျလညျမြှဝေ ဖျောပွခွငျးဖွဈပါသညျ (၂၅ . ၇ . ၂၀၂၀)ရကျနတှေ့ငျ ကြှနျတျောတို့စခနျးမှ မီးသတျယာဉျဖွငျ့ ယာဉျမတျောတဆ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး တဘကျယာဉျပိုငျရှငျဘကျအား လြှျောကွေးငှေ သိနျး (၃၀) ကပျြ ပေးလြှျောခဲ့ရပွီး ယခုအခါ တဈဖကျယာဉျပိုငျရှငျ ဘကျမှ လြှျောကွေးငှေ သိနျး(၃၀)မှငှေ ကပျြ (၁၀)သိနျး အားပွနျလညျ ပေးအပျ လှုဒါနျးကူညီခဲ့ပါသညျ။ ယခုလို ကြှနျတျောတို့ရဲ့အခကျအခဲတှဘေကျကိုပွနျလညျကွညျ့ရှူ့စာနာနားလညျပေးတဲ့အတှကျလညျးအထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့တငျရှိနသေောအကွှေးလညျးအနညျးငယျလြှော့သှားလို့လညျးဝမျးသာမိပါသညျ။ လကျရှိစခနျးမှ ပကျြစီးသှားသောမီးငွိမျးသတျယာဉျကိုလညျးယနတှေ့ငျ စတငျ၍ ပွနျလညျပွငျဆငျနိုငျရနျအတှကျကိုလညျးကားကွီးဝပျရှော့သို့ ပို့ဆောငျထားပွီးဖွဈပါသညျ။ အရငျအတိုငျး စခနျးတှငျ ပွနျလညျတာဝနျထမျးဆောငျနိုငျရနျအတှကျကွိုးစားဆောငျရှကျလြှကျရှိပါသညျ။ အဖကျဖကျမှဝိုငျးဝနျးကူညီပေးကွသူမြားကိုလညျးကြှနျတျောတို့စခနျးအဖှဲ့မှအထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။ သတငျးနှငျ့ပွနျကွားရေး အရနျမီးသတျတပျဖှဲ့စခနျး(၄)ရပျကှကျ ရှပွေညျသာမွို့နယျ ဖုနျး -09-400544406/09-400566673 ယခုအကြောင်းအရာသည် ရွှေပြည်သာအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တင်ထားသော Post အား ပြန်လည်မျှဝေ … Read more
Categories Uncategorized Tags 30
အကဲမစမျးနဲ့ ပှဲကွမျးသှားမယျ မိနျးမတဈယောကျကခေါငျးကလေးငုံ့ပါးစပျကလေးစထေ့ားတိုငျး မာနနဲ့ကိုယျရညျကိုယျသှေးညံ့တဲ့ခပျညံ့ညံ့,ခပျတုံးတုံးမိနျးမလို့တော့မထငျလိုကျနဲ့။ တဈယောကျတညျးကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျလို့ ရညျရှယျရာပနျးတိုငျကိုလြောကျလှမျးနတေဲ့မိနျးမတဈယောကျကို အထငျသေးစျောကားခငျြသူတှရှေိတယျ။ လှောငျပွောငျရူံ့ခခြငျြသူတှရှေိတယျ။ကဲ့ရဲ့ခြိုးနှိမျခငျြသူတှရှေိတယျ။နငျးဖိခွမှေခငျြသူတှရှေိတယျ။ ဘယျသူ့အကူအညီမှမယူ,ဘယျသူ့အမှီအခိုမှမပါပဲ, ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျနတေယျဆိုမှတော့ မာနနဲ့ထကျမွတျမူအစှယျတှကေသာမာနျထကျခြှနျမွလို့ပေါ့… တဈခါတလအေမောကျကလေးထောငျ,အစှယျကလေးထုတျပွလိုကျမှ တဈပှဲတဈလမျးအကဲစမျးကွညျ့ခငျြသူတှရှေဲသှားကွတော့တယျ။ မှတျထားနျော!အဲဒီမိနျးမမြိုးတှကေအစှယျတဈခြောငျးခြိုးလို့ကတော့ နောကျထကျအစှယျပှားတှပွေနျထှကျလာတတျတယျ။ သတိထား…. Nan Khin May Win အကဲမစမ်းနဲ့ ပွဲကြမ်းသွားမယ်​ မိန်းမတစ်ယောက်ကခေါင်းကလေးငုံ့ပါးစပ်ကလေးစေ့ထားတိုင်း မာနနဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးညံ့တဲ့ခပ်ညံ့ညံ့,ခပ်တုံးတုံးမိန်းမလို့တော့မထင်လိုက်နဲ့။ တစ်ယောက်တည်းကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်လို့ ရည်ရွယ်ရာပန်းတိုင်ကိုလျောက်လှမ်းနေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကို အထင်သေးစော်ကားချင်သူတွေရှိတယ်။ လှောင်ပြောင်ရူံ့ချချင်သူတွေရှိတယ်။ကဲ့ရဲ့ချိုးနှိမ်ချင်​သူတွေရှိတယ်။နင်းဖိခြေမွချင်သူတွေရှိတယ်။ ဘယ်သူ့အကူအညီမှမယူ,ဘယ်သူ့အမှီအခိုမှမပါပဲ, ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုမှတော့ မာနနဲ့ထက်မြတ်မူအစွယ်တွေကသာမာန်ထက်ချွန်မြလို့​ပေါ့… တစ်​ခါတ​လေအမောက်ကလေးထောင်,အစွယ်ကလေးထုတ်ပြလိုက်မှ တစ်ပွဲတစ်လမ်းအကဲစမ်းကြည့်ချင်သူတွေရှဲသွားကြတော့တယ်။ မှတ်ထားနော်!အဲဒီမိန်းမမျိုးတွေကအစွယ်တစ်ချောင်းချိုးလို့ကတော့ နောက်ထက်အစွယ်ပွားတွေပြန်ထွက်လာတတ်တယ်။ သတိထား…. Nan Khin May Win
Categories Tameelay Knowledge Tags 30
May 30, 2020 by PP
မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ပြင်ပရုပ်ရည်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အရည်အချင်းလည်းရှိတဲ့သူမျိုးကိုပြောတာပါ။ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရုပ်ရည်ချောမောလှပနေဖို့၊ ပြီးပြည့်စုံနေဖို့မလိုပါဘူး။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုရှိဖို့၊ အများအမြင်မှာတင့်တယ်နေဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့အင်္ဂါရပ်နဲ့ညီအောင် နေထိုင်နည်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အပေါ်ယံတွေကိုအရမ်းဦးစားမပေးပါနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာ အပေါ်ယံတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်ယံမိတ်ကပ်တွေ၊ဈေးကြီးပေးရတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီး branded အသုံးအဆောင်တွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ အပေါ်ယံတွေကို ဦးစားပေးလွန်းတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးပါတဲ့အရာတွေ၊ ကိုယ်တကယ်ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကို မေ့လျော့နေမိတတ်ပြီး ဒီအပေါ်ယံတွေက ဘဝအတွက်တကယ်အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်မြင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်ယံတွေကို အရမ်းဦးစားမပေးပါနဲ့။ ထိုက်သင့်သလောက်ပဲ လုပ်ပါ။ (၂) ဆံပင်ကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားပါ ဆံပင်ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းတာ၊ အရောင်ဆန်းဆန်းတွေခဏခဏပြောင်းဆိုးတာက သင့်ကို အရမ်းမိုက်၊ အရမ်းအထာကျတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သန့်ရှင်းသန့်ရပ်တဲ့ ဆံကေသာကသာ သင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေတာပါ။ အရောင်ဆိုးရင်လည်း ညီညီညာညာဆိုးတာမျိုး၊ ကောက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖြောင့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှုပ်ပွမနေအောင်၊ အဖျားတွေကွဲပြီး ဖွာလန်မနေအောင် အမြဲဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ … Read more
Categories General Knowledge Tags 30, pp
အပျော်ရည်းစားမထားခင်မှာ ဒါတွေကိုအရင်စဉ်းစားပါဦး သမီးလေးရေ ….
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ဘဝလက်တွဲဖောက်အဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးချစ်သူ၊ရည်းစားထားကြသလို၊ လက်တွဲဖို့အထိမရည်ရွယ်ဘဲ အပျော်ရည်စားထားတာမျိုးလည်း လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ကိုအပျော်တွဲတယ်ဆိုတာ လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အပျော်ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာမကောင်းကြောင်း၊ မထားသင့်ကြောင်းတွေပြောပြီး လိုက်ပိတ်ပင်နေလို့လည်း မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေ အပျော်ရည်းစားထားဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကို အလေးအနက်ထားစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲမယ်ဆိုရင်ရောလက်ခံနိုင်မှာလား အပျော်တွဲတယ်ဆိုတာ ဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့သူ၊ သူများအတွက်စဉ်းစားပေးတတ်တဲ့သူတွေကတော့ လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှ အပျော်တွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က သူများခံစားချက်ကိုအလေးထားလို့ပါ။ အပျော်တွဲခံရတဲ့သူဘက်က တွေးပေးတတ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်ကို အပျော်ပဲတွဲမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုဒီလိုလုပ်ရင်ရောလက်ခံနိုင်မလား စဉ်းစားပါ။ (၂) ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်များလွန်းတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကိုအပျော်တွဲတာက ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ်။ ကိုယ်ကယောကျာ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်ရည်းစားထားတာက ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ်။ ကိုယ်က အပျော်တွဲရုံပဲစဉ်းစားထားသလို တစ်ဖက်လူကလည်း ကိုယ့်ကိုအပျော်ကြံမယ်၊ ကြောရရုံကြံမယ်၊ ငွေညှစ်ဖို့ချဉ်းကပ်လာတာမျိုး၊ ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားလာတာမျိုးတွေ … Read more
ကိုယျ့တနျဘိုးကို သူမြားဆီမှာ မသှနျခပြါနဲ့
May 30, 2020 by daddy
ကိုယျ့တနျဘိုးကို သူမြားဆီမှာ မသှနျခပြါနဲ့ ဒီလူက ကိုယျ့ကို ဒီလိုပွောလို့ကိုယျကလိုကျပွီး ဒီလိုပွောရလားလို့၊တုံ့ပွနျလိုကျတယျ၊ ဟိုလူက ဟိုလိုပွောလို့ ဘာလို့ဟိုလိုပွောရလဲဆိုပွီးလိုကျတုံ့ပွနျလိုကျတယျ၊ ဒီလိုလုပျခွငျးဟာမပွီးနိုငျတဲ့ သံသရာကို ခြဲ့ထှငျဖို့ကွိုးစားနတောနဲ့တူပါတယျ။ ကိုယျတုံ့ပွနျဖို့စဉျးစားတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ၊တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ကိုယျ့စိတျဆငျးရဲနရေမှာအမှနျပါပဲ။ ပတျသကျစရာမကောငျးတဲ့သူကို သှားတုံပွနျလိုကျခွငျးဟာလညျးစိတျဆငျးရဲဖို့ ပတျသကျလိုကျတာတဈမြိုးပါပဲ။ အျောဒီလူက ဒီလိုပွောတတျပါလား၊ဟိုလူကဟိုလိုပွောတတျပါလား၊ ကိုယျ့စိတျထဲမှာ မှတျသားလိုကျတယျ။ မှတျသားတယျဆိုတာ ခံစားပေါကျကှဲနဖေို့ မဟုတျပါဘူး။ သူက ဒီအတိုငျးပွောတတျတဲ့သူတဈယောကျပါလား။သူ့ကိုဝေးဝေးကရှောငျမှအကုသိုလျကငျးမယျ။ သူပါးစပျကို သူတနျဖိုးမထားတတျတော့ သူပွောမှာပဲလေ။ လူဆိုတာ ကိုယျ့တနျဖိုးနဲ့ကိုယျရှိကွတာပဲလေ ကိုယျက ပွနျလညျတုံ့ပွနျလိုကျတော့ ကိုယျ့တနျဖိုးကိုသူ့ဆီမှာ သှားသှနျခတြာနဲ့တူနမှောပေါ့။ ကိုယျလညျးကိုယျ့တနျဖိုးနဲ့ကိုယျ အေးအေးခမျြးခမျြးနတောပဲကောငျးပါတယျလေ ဆိုပွီး၊ သူတို့အဆငျပွကွေပါစေ။ ကိုယျ့တနျဖိုးကလညျး သူမြားပါးစပျဖြားမှာ ရှိနတောမဟုတျလတေော့ လိုတဈမြိုး၊မလိုတဈမြိုးပွောတဲ့သူတှရေဲ့ စကားကို သံယောငျလိုကျ တုံပွနျနရေငျအမုနျးသံသရာရှညျတာကလှဲပွီး ဘာအကြိုးထူးမှာလဲဆိုတဲ့ စိတျထားလေးတှေ မှေးနိုငျရငျ။ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ကိုယျအေးခမျြးမှာ အမှနျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျသူက ကိုယျ့ကို ဘာပွောပွောသိပျပွီး … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 30, Sayardaw
ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေပူထဲအသွားများတာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အအေးမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နှာစေး၊ချောင်းဆိုး၊ ဖျားတာတွေနဲ့အတူ လည်ချောင်းနာတာလည်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနာတဲ့အခါ လည်ပင်းတစ်ခုလုံးပူပြင်းခြောက်သွေ့နေပြီး နေရခက်လှပါတယ်။ လည်ချောင်းနာပျောက်ဖို့အတွက် အရမ်းခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒီနည်းလေးတွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူကုသလို့ရပါတယ်။ (၁) ပျားရည် ပျားရည်က ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသေစေပြီး ရောင်ရမ်းတာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။ လည်ချောင်းနာတဲ့အခါ ပျားရည်တစ်ဇွန်းကို ဒီအတိုင်းစားပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနွေးအဖြူလေးနဲ့ရောပြီး သောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ လည်ချောင်းနာတာချက်ချင်းသက်သာပါလိမ့်မယ်။ (၂) ဆားရည် ရေနွေးအဖြူတစ်ခွက်ထဲကို ဆားတစ်ဇွန်းထည့်မွှေပြီး တစ်နာရီတစ်ခါပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ ဆားရည်ရဲ့အစွမ်းကြောင့် လည်ချောင်းနာတာ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (၃) သံပရိုသီး သံပရိုရည်မှာပါဝင်တဲ့ဗီတာမင် စီ က ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ပျားရည်တစ်ဇွန်းထဲကို သံပရိုသီးတစ်စိတ်ညှစ်ထည့်ပြီး သောက်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ လည်ချောင်းနာတာကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ (၄) ရေနွေးကြမ်း လက်ဖက်ခြောက်ရေနွေးကြမ်းကလည်း လည်ချောင်းနာတာကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ရေနွေးကြမ်းကို တစ်နေ့နှစ်ခွက်သောက်ပေးရုံနဲ့ လည်ချောင်းနာတာကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ written … Read more
Categories General Knowledge, Tameelay Knowledge Tags 30, pp